ओलीले किन हटाउँर्दैछन् यि मन्त्रीहरुलाई ? | My News Nepal
ओलीले किन हटाउँर्दैछन् यि मन्त्रीहरुलाई ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्य सम्पादनमा कमजोर रहि बद्नाम हुँदै गएका केही मन्त्रीहरूलाई हटाउने तयारी गरेका छन् । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबाट असन्तुष्ट बनेका ओलीले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरका लागि तयारी गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधान एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने बारेमा परामर्श गरेका छन् । यादव पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भन्दा परराष्ट्रमा जान चाहेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको कार्यसम्पादनबाट ओली सन्तुष्ट नभएको बुझिएको छ ।
ज्ञवालीलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा लैजाने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ । विभिन्न विवादमा परेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई मन्त्री पदबाट हटाउने तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको बालकोटस्थित निवासमा अड्डा जमाएर बसेका बास्कोटाको कार्यशैलीले सरकारको बद्नाम भएको भन्दै नेकपाकै नेताहरुले विरोध जनाएपछि ओलीले उनलाई हटाउन परामर्श गरेका छन् । यसबारेमा जानकार रहेका ओलीले बास्कोटालाई सम्झाएर मन्त्री पदबाट अपदस्थ गर्ने योजनामा रहेको एक नेताले बताए ।
ओली आफूसँग रिसाएको चाल पाएका मन्त्री बोस्कोटाले विभिन्न शक्ति प्रयोग गरेर मन्त्री पद जोगाइ राख्ने योजना बनाएका छन् । उता, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको गतिविधिबाट पनि ओली सन्तुष्ट छैनन् । तारा गाउँ विकास समितिको सेयर विवादमा परेका अधिकारीले कामलाई भन्दा पनि प्रचारलाई बढी महत्व दिएको भन्दै ओली रिसाएका छन् ।
अधिकारीलाई पर्यटन मन्त्रीबाट हटाएर नेकपाका अर्का नेतालाई त्यो जिम्मेवारी दिने योजनामा पुगेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओली गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कार्यशैलीबाट पनि सन्तुष्ट छैनन् । थापाले ओलीलाई अफ्ठ्यारो बनाउने गरेर गतिविधि गरेपछि सरकारभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । यद्यपी पछिल्लो समय सुन तस्करी, हुण्डी कारोबारीहरुको सातो खाएका गृहमन्त्री थापाले भने जनताको मन जितेका छन् । ठेक्का लिएर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरुलाई सूची नै बनाएर कारबाही गर्ने बताएका गृहमन्त्री थापा पछिल्लो समय भए भने पछि हटेका छन् ।
अधिकांश ठेकेदाहरुले नेकपामा नेताहरुलाई चन्दा दिएका कारण र पछिल्लो समय नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत काम नगर्ने ठेकेदारहरुकै पक्षमा उभिएपछि गृहमन्त्री थापा बाध्य भएर ‘ब्याक’ भएका छन् । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेर हाइहाई पाएका थापालाई प्रचण्डका कारण काम गर्न असहज भएको नेकपाकै एक नेता दाबी गर्छन् ।
त्यसैगरी पछिल्लो समय श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट पनि विवादमा मुछिएका छन् । ठगी गर्ने नेकपा निकटका मेनपावर व्यवसायीलाई कारबाही नगरेका कारण उनले मेनपावरमा हुँदै आएको ठगीको सिन्डिकेट तोड्न सकेका छैनन् । ठगीमा मुछिएका नेकपा निकट मेनपावर व्यवसायी गोविन्द थपलियालाई जोगाएको काण्डमा पनि मन्त्री विष्ट विवादमा मुछिएका छन् । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ
डीपीएल क्रिकेट : रुपन्देही च्यालेन्जर्ससँग धनगढी पराजित
उपाधिका लागि म्यानमारविरुद्ध भिड्दै नेपाल
८ मीनेट अगाडि